Mashruuca Zero Balance: Dakota, Hennepin, Ramsey, Minneapolis, iyo St Paul
Si aad u samaysato codsi ku qora [luuqadda la rabo] ka dooro [magaca luqadda oo ku qoran Ingiriis] ee websaydhka codsiga.
Si aad ugu codsato [luuqadda la rabo] warqadda arjiga kala soo deg halkaan.
Degmooyinka Dakota, Hennepin iyo Ramsey, iyo magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul ayaa bixinaya kaalamada degdegga ah ee kirada iyada oo loo marayo barnaamij loogu magac daray Zero Balance Project.
Mashruuca Zero Balance Project, milkiilayaasha guryaha ayaa bilaabaya oo hogaaminaya arjiga iyaga oo ka wakiil ah kireystayaasha.
Waxaa jira laba barnaamij oo kaalmada degdegga ah ee kirada ah ee ku jira MN hadda: RentHelpMN iyo Mashruuca Zero Balance Project.
Akhriso waxyaabaha soo socda kahor intaadan codsanin:
Kireystayaashaydu waxay codsadeen RentHelpMN. Kaalmada miyaan ka codsan karnaa Mashruuca Zero Balance Project?
Milkiilayaasha/maareeyayaasha guryaha iyo kiraystayaasha waxay kaalmada ka heli karaan oo keliya hal barnaamij isla bilahaas.
Haddii kiraystahu uu codsi u soo gudbiyey RentHelpMN, fadlan sii wad la shaqaynta barnaamijkaas.
Waxaan ahay maamule/milkiile guri oo horey guriyihiisa uga diiwaan gashanaa RentHelpMN. Miyaan sidoo kale u baahanahay inaan isdiiwaangaliyo oo aan macluumaad siiyo Mashruuca Zero Balance Project?
Haddii kireystahaagu uu arji u gudbiyay RentHelpMN, fadlan sii wad la shaqaynta barnaamijkaas.
Haddii kiraystahaagu aanu arji u gudbin RentHelpMN oo aad jeclaan lahayd inaad codsi ka bilowdo Mashruuca Zero Balance Project, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso Mashruuca D Zero Balance Project oo aad halkaa ku soo gudbiso wixii dukumiintiyo ah ee la codsaday.
Dukumintiyada iyo macluumaadka looma kala gudbin karo barnaamijyada. Xusuusnow in milkiilayaasha/maareeyayaasha guryaha iyo kireystayaasha ay kaalmada ka heli karaan keliya hal barnaamij isla bilaha.
Waa maxay faraqa u dhexeeya RentHelpMN iyo Mashruuca Zero Balance Project?
RentHelpMN iyo Mashruuca Zero Balance Project labaduba waa barnaamijyo kaalmo kiro oo degdeg ah, oo lagu maalgeliyo barnaamijka deeqaha federaalka oo isku mid ah.
RentHelpMN waa barnaamij gobolada oo dhan ah halkaas oo kiraystaha uu hogaamiyo habraaca codsashada kaalmada.
Mashruuca Zero Balance Project wuxuu u adeegaa degmooyinka Dakota, Hennepin iyo Ramsey halkaasoo milkiilayaasha iyo maareeyayaashu guryaha ay hoggaamiyaan habraaca codsashada kaalmada. Halkaan waxaa ku qoran waxyaabaha muhiimka ah ee ku saabsan barnaamij kasta.
Gobolka oo dhan ah
Kireystayaasha iyo milkiileyaasha/maareeyayaasha guryaha labaduba way bilaabi karaan codsiyada
Kireystayaasha ayaa bixiya macluumaadka guud iyo kan dakhliga, kirada waqtigeedii dhaaftay iyo/ama biilasha adeegyada guriga iyo heshiiska kirada waxayna muujinayaan saameynta ka soo gaartay COVID.
Milkiilayaasha/maareeyayaasha guryaha waxay bixiyaan macluumaadka guriga iyo macluumaadkat lacag bixinta waxayna xaqiijinayaan inta lacag ah ee ay dad ku leeyihiin.
Xadka Dakhliga: 80% AMI
Kaalmada ugu badan: illaa 15 bilood
Kharashaadka u-qalma waxaa ka mid ah kirada, khidmadaha kirada, yutiilitida iyo yutiilitida uu kireystaha bixiyeye
Codsiyada waxaa la aqbalaa si isku furan ilaa ugu yaraan Diseembar 2021
Wadarta maalgelinta $518 milyan
Wixii macluumaad dheeraad ah, wac 211
Mashruuca Zero Balance Project
Degmooyinka Dakota, Hennepin iyo Ramsey, oo ay ku jiraan Minneapolis iyo St. Paul
Milkiilayaasha/maareeyayaasha guryaha waxay bilaabaan codsiyada
Milkiilayaasha/maareeyayaasha guryaha waxay bixiyaan ijaarka, macluumaadka guriga, lacagta ay dad ku leeyihiin iyo macluumaadka lacag bixinta.
Kireystayaasha ayaa bixiya macluumaadka guud iyo kan dakhliga, waxayna muujiyaan saameynta ka soo gaartay COVID.
Kharashaadka uqalma waxaa ka mid ah kirada, khidmadaha kirada iyo kharashaadka adeegyada guriga ee ku jira heshiiska kirada. Kharashaadka adeegyada ku qoran magaca kiraystaha laguma bixin karo barnaamijkan.
Codsiyada waxaa la aqbalaa Juun 7 ilaa Juun 20, 2021 ama ilaa lacagta ka dhammaato
Wadarta maalgelinta $34 milyan, iyadoo dhici karta in lacag lagu soo daro markii loo baahdo
Wixii macluumaad dheeraad ah, iimayl u dir zerobalanceproject@housinglink.org
Kharashaad noocee ah ayaa lagu bixin karaa Mashruuca Zero Balance Project?
Kirada aan la bixin
Laga soo bilaabo Maarso 13, 2020.
Kharashaadka adeegyada guriga iyo ajuurada ee aan la bixin kuwaas oo ku jira heshiiska kirada
Qashinka/Qashinta Adag/Uruurinta Qashinka Si Dib u Warshadeyn loogu Sameeyo
Tamar Dhelinta (Xaabo, xashka alwaaxa, borobayn)
Ajuurada lacag bixinta la soo daahiyey ee aan la bixin
Ilaa 8% ee wadarta kirada, sida uu oggol yahay qaanuunka MN, laga soo bilaabo Maarso 13, 2020.
3 Bilood oo ah Kirada mustaqbalka( Kirada la filayo)
Kirada aan la bixin waa in la soo gaarsiiyaa hada kahor intaan la ansixin bixinta kirada mustaqbalka.
Kharashaadka adeegyada guriga uu mulkiilaha qeyb uga dhigey kirada waxaa loola dhaqmayaa sidii kiro ahaan.
Waa kuwee qoysaska kireystiyaasha ah ee u qalmo mashruuca Zero Balance Project?
Kireystuhu wuxuu halis ugu jiraa guri la’aan ama xasillooni darro.
Guriga wuxuu ku yaalaa meel kamid ah goobahan:
Degmada Hennepin, oo ay ku jirto Mineapolis
Degmada Ramsey, oo ay ku jirto St.Paul
Dakhliga qoyska kireystaha wuxuu lamid yahay ama ka hooseeya 80% ee Dakhliga Dhexe ee Aagga:
Qoys ka kooban 1 qof - $55,950
Qoys ka kooban 2 qof - $63,950
Qoys ka kooban 3 qof - $71,950
Qoys ka kooban 4 qof - $79,900
Qoys ka kooban 5 qof - $86,300
Qoys ka kooban 6 qof - $92,700
Qoys ka kooban 7 qof - $99,100
Qoys ka kooban 8 qof - $105,500
Ugu yaraan hal qof oo kamid ah qoyska kireystaha guryaha ah ayaa uqalma gunnooyinka shaqada AMA la kulmay hoos udhac dakhliga qoyska ah, galay qarash aad u fara badan, ama la kulmay dhibaato kale ee dhaqaale sababo la xariira dillaaca COVID-19, sida:
Saacadaha shaqada ama dakhliga oo yaraaday.
Ka tagay shaqada sababo la xariira jawi aan nabdoonayn
Uga tagay shaqada si uu u daryeelo qoyska
Fasax shaqo oo qasab ah sababo la xariira iskuulka oo la xirey ama jadwalka daryeelka caruurta oo isbadal ku yimid.
Korodh ku yimaaday kharashyada daryeelka ilmaha.
Ilmaha oo guriga jooga sababo la xiriira xirnaanshaha iskuulka.
Isticmaalka internetka iyo kharashyada kumbuyuutarka ee looga baahan yahay in lagu shaqeeyo ama ilmaha ay khadka tooska ah wax uga bartaan.
Kharashyada caafimaadka ama aaska sababo la xiriira COVID-19.
Iibsiga qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed.
Kharashyada gaadiidka kale.
La karantiilay sababo la xariira qaadista covid19.
Daryeelayay dadka kale ee qaba COVID-19.
Maxay Mulkiileyaasha guriyuhu u baahan Yihiin Inay U Diyaariyaan Codsiga Mashruuca Zero Balance Project
Nuqulka buuxa oo heshiiska kirada ah.
Bayaanka canshuurta guriga oo muujineya halka gurigu uu ku yaal. (Degmada Dakota, Degmada Hennepin, Degmada Ramsey)
Buugga kirada oo muujinaya kirada aan la bixin,ajuurada, iyo adeegyada (keliya adeegyada ku jiray heshiiska kirada ayaa magdhow laga bixin doonaa)
Haddii kiraystaha uu bixiyo kirada isagoo kaashanaya kabitaan dakhli (tusaale ahaan Foojarka Xulashada Guryaha) - Ogeysiis ka socda hay'adda guryaha kaas oo muujinaya sida kireystaha qaybtiisa kirada wax looga bedelay sababo la xiriira dakhligii ka lumay.
Cinwaanka iimaylka kiraystaha. Sidan ayaa loogu casuumay inay u dhammaystiraan qaybtooda.
Maxay Kireyaashu U Baahan Yihiin Inay U Diyaariyaan Codsiga Mashruuca Zero Balance Project
Arjiga, kireystayaasha waxaa looga baahan yahay inay xaqiijiyaan in dakhligoodu yahay mid u qalma (Eeg dakhliga u qalma).
Waxay haystaan 3 xulashooyin:
Xulashada 1aad – Soo geli nuqulka labada bog ee ugu horreeya ee canshuur celinta sanadkii 2020.
Xulashada 2aad - Soo geli waraaqo xaqiijinaya inay u qalmaan barnaamijyo u adeega dadka dakhligoodu hooseeyo. Tusaale ahaan: SNAP,WIC, Section 8, TANF, FDPIR, SNP).
Waraaqaha waa in lagu muujiyaa kiraystaha magaciisa iyo cinwaankiisa.
Waraaqaha waa in sidoo kale loo soo saaray kiraystaha wixii ka dambeeya 1/1/2020.
Xulashada 3aad (Laba xulasho halkan)
1. Soo geli foomka Shahaadada Dakhliga ee Dakhliga Eberka ah Nuqulka foomkan ayaa lagala soo degi karaa arjiga.
2 Meelaha laga helo dakhligooda, iyo cadadka dakhliga, si toos ah ugu qor arjiga.
Kireystaha waxaa looga baahan yahay inuu soo geliyo dukumiintiyada dakhligooda (Tusaale ahaan: Jeegga mushahaarka). Arjiga, kireystayaasha waxaa sidoo kale laga codsanayaa inay sameeyaan waxyaabaha soo socda:
Inay xaqiijiyaan in cadadka kirada aan la bixin, khidmadaha, iyo kharashaadka adeegyada guryaha ee kireeyuhu codsanayo inay sax yihiin.
Inay aqoonsadaan dhibaatooyinkooda dhaqaale ee la xiriira COVID-19 (Eeg dhibaatooyinka u-qalma).
Inay liis gareeyaan wixii kaalmo kiro oo degdeg ah oo hore kuwaas oo la xiriira COVID-19 ee ay heleen (ama ay milkiileyaasha guriga aad degan tahay ay ku heleen magacaaga). Waxaa laga codsanayaa inay cadadka ku soo qoraan arjiga.
Su'aalaha guud ee ku saabsan Mashruuca Zero Balance Project
Waxaan horaan kaalmo uga helay RentHelpMN ama arjiga Degmada Hennepin Maarso 2021 Ma codsan karaa Mashruuca kaalmada Zero Balance Project hadii aan weli u baahanahay caawimaad?
Xaaladaha oo dhan waxaad heli kartaa oo keliya 15 bilood oo ah wadarta kaalmada kirada ah wadar ahaan inta aad ka hesho dhammaan barnaamijyada oo la isku daray, kuwaas oo loo ballaarin doono illaa wadar ahaan 18 bilood dhowaan.
Hadii aad kaalmo ka heshay RentHelpMN ama Degmada Hennepin ee 15 bilood mise wax ka yar, waxaad bilaabi kartaa inaad Mashruuca Zero Balance Project ka codsato kaalmada dheeraadka ah ee aad ubaahantahay. Waxaad u baahan doontaa inaad bilowdo codsi cusub maxaa yeelay codsigaaga looma gudbin karo barnaamij kale.
Wili ma aanan bilaabin codsi Barnaamijkee ayaa ii fiican aniga, RentHelpMN miyaa ama mashruuca Zero Balance Project?
Kuwa kaalmada kirada ka raadinaya Degmooyinka Dakota, Hennepin iyo Ramsey oo aan weli kaalmada kirada ka codsanin RentHelpMN, labada barnaamijba waad heli kartaan.
Kireystayaasha iyo maareeyayaasha/milkiilayaasha guryaha kuwaas oo doorbida in kiraystaha uu hogaamiyo habraaca codsiga, RentHelpMN ayaa laga yaabaa inuu yahay xulashada ugu fiican.
Kireystayaasha iyo maareeyayaasha/milkiilayaasha guryaha kuwaas oo doorbida in maareeyayaasha/milkiilayaasha guryaha ay hogaamiyaan habraaca codsiga, Mashruuca Zero Balance Project ayaa laga yaabaa inuu yahay xulashada ugufiican.
Waa maxay xaddiga ugu badan ee aan ka codsan karo qayb kasta?
Ma jirto wax xadidan.
Sideen u codsadaa kiro 3 bilood ah oo mustaqbalka (la filayo)?
Kireystayaasha ayaa sidan sameeya. Qeybta codsiga ee kiraystaha waxaa kujira sanduuq hubin ah oo ay ku codsan karaan kirada mustaqbalka (la filayo) haddii ay ogaadaan inaysan awoodi karin inay bixiyaan bilahaas mustaqbalka ah.
Kireystayaashaydi waxay ka walwalsan yihiin in arrintani ay saameyn ku yeelan doonto kaalmooyinka/gunnooyinka ay helaan. Ma saameyn doontaa?
Maya. Tani looma xisaabin karo dakhli ahaan. Lacagta waxay si toos ah u aadaysaa mulkiilaha guriga.
Kiraystayaashaydu ma diiwaangashana waxayna ka baqayaan inay gudbiyaan macluumaadkooda. Maxaan u sheegaa?
Magacyada qoysku laguma wargaliyo ICE. Degmooyinka Dakota, Hennepin, iyo Ramsey ayaa heli doona xogta, iyo sidoo kale magaalooyinka Minneapolis iyo St Paul.
Kireystayaashaydu ma dhammaystiri doonaan qaybtooda codsiga. Weli ma codsan karaa?
Maya. Kireystayaasha sidoo kale waa inay dhameystiraan qeybtooda codsiga.
Haddii codsigayga la oggolaado, goorma ayaan helayaa lacagta?
Jeeg ayaa boostada loogu soo diri doonaa cinwaanka uu mulkiilh gurigu ku qorey codsiga 14 maalmood gudahood marka la ansixiyo arjiga.
Sidee codsiyada loo kala hormariyaa?
Codsiyada dib ayaa loo eegaa waxaana lacagtooda loo bixiyaa hadba sidii loola soo kala hormaro illaa Juun 20, marka laga reebo kuwa soo socda:
Codsiyada kirada baaqiga ah ayaa laga shaqeeyaa kahor codsiyo kasta oo ay kujiraan keliya kirooyinka la filayo mustaqbalka, iyo
Codsiyada halka dakhliga kireystaha uu lamid yahay ama ka hooseeyo 50% ee Dakhliga guud ee aagga ama mid ka mid ah ama in ka badan xubnaha qoyska ay shaqo la'aan ahaayeen 90 maalmood ama in ka badan ayaa laga shaqeynaa kahor codsiyada kale.
Waxaan horey u soo gudbiyay codsigeyga, laakiin hada waxaan ubaahanahay inaan qof kala hadlo arinkaas. Yaan la xariiraa?
Iimayl u dir ZeroBalanceProject@FHFund.org ama ka wac 612-895-7880.
Kiraystayaashaydu waxay u baahan yihiin caawimaad si ay u buuxiyaan qaybtooda codsiga. Yay la xariirayaan?
Xagee ka eegi karaa heerka uu marayo codsigeyga? Sidee ayaa la ii soo ogeysiinayaa markii codsigeyga la oggolaado?
Gal akoonkaaga Neighborly si aad u hubiso heerka uu marayo codsigaaga. Haddii aad su'aalo qabtid, iimayl u dir ZeroBalanceProject@FHFund.org adigoo raacinaya lambarkaaga codsiga iyo su'aashaada. Waxaad heli doontaa iimayl markii codsigaaga dib loo eego.
Sideen racfaan uga qaadan karaa codsi la diiday?
Waxaad haysataa 10 maalmood laga bilaabo markii aad hesho iimaylka diidmada ah si aad rafcaan u qaadid. Iimayl u dir Appeals@FHFund.org adigoo raacinaya macluumaadka lagaala soo xiriiri karo iyo lambarkaaga codsiga, sababta(sababaha) codsigaaga loo diiday, iyo sababta aad u rumaysan tahay in diidmada loo sameeyay si khalad ah.
Halkan ka codso